Yaa ka dambeeyey weerarka ka dhacay guriga CC Shakuur? - Caasimada Online
Home Warar Yaa ka dambeeyey weerarka ka dhacay guriga CC Shakuur?
Yaa ka dambeeyey weerarka ka dhacay guriga CC Shakuur?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Sida ay sheegayaan warar aan ka helnay ilo kala duwan oo ku dhow xukuumadda Soomaaliya; weerarka lagu qaaday guriga Wasiirkii hore ee Iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah waxa fuliyey ciidamo ka tirsan sirdoonka iyo Nabadsugidda Soomaaliya.
Waxa jira hadallo nacayb iyo dhiirrigelin dagaal xambaarsan oo uu si joogto ah u jeediyo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, kuwaas oo uu sheehu ku sheegay in ay munaasab tahay ku xadgudbidda dhammaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta dhaliila go’aanada xukuumadda Raisalwasaare Kheyre.